Sandi Education: Lwin Naung Htun LNH: Advanced level management skills
Free Seminar : Every Sunday 6:00 PM sandiwin07@gmail.com
Dr. Sandi Win
Professional Lecturer Dr. Sandi Win - Generate Ideas
Lwin Naung Htun LNH
Advanced level management skills
Blog entry by Lwin Naung Htun LNH
by Lwin Naung Htun LNH - Wednesday, 16 December 2020, 12:26 PM
အသက်အရွယ် ကြီးမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ အသိပညာဗဟုသုတများ၊ အရည်အချင်းများ ပိုမိုပြည့်စုံလာရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအရာများကို ရရှိရန် အချိန်၊ ငွေ၊ ကျွမ်းကျင်သူ၊ မှန်ကန်တဲ့ပညာ စတဲ့အရာများကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရှာဖွေဆည်းပူးရန် လိုအပ်လှပါတယ်။
Basic တန်းမှာ ပညာဆည်းပူး၍ အားမရသေးသောသူများအတွက် Advance Level Management သင်တန်းလေးပါ။
Management ဆိုတော့ Planning, Organising, Leading and Coontrolling ဒီလောက်ပဲသိခဲ့တာ၊ အခုမှ ဒီလောက်ကျယ်ပြန့်မှန်းသိတော့တယ်။ Advanced Level Management တန်းမှ ကျောင်းသားတစ်ယောက်မှ ကပြောပါတယ်။ Basic Level တန်းမှလည်း အခြေခံလိုအပ်တာ တွေ သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခု Advanced Level တန်းကိုရောက်တော့ Power တွေမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျမကျောင်းသားတွေကို အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။ စာတွေနားလည်ပြီး ပျော်ရွှင်မိန်းမောနေရင်မဟုတ်သေးဘူး။ ဒီထက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိဖို့လိုတယ်။ ဆက်တက်ပါ၊ ဆက်လက်ရှာဖွေပါ များများသိလေ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာတွေ့ရှိပြီး အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ ကြိုးစားနေကြတာ better Life ကို ရဖို့ပဲ မဟုတ်ပါလားရှင် ။
Basic level နဲ့ အားမရတော့ဘူးဆိုတဲ့ အားပေးသူများအတွက် 32 hours course!!
' Passion can't be taught'
1. Management for business
- Ethics and Social Responsibility
4. Eco and Accounting
- Basic economic principles
-Monetary and Fiscal policy
- Finicial management
- Basic Formula and methods
[ Modified: Wednesday, 16 December 2020, 12:43 PM ]
View all entries by Lwin Naung Htun LNH
Boost to better Life
(+95) 09 201 6394
Copyright © 2021 Sandi Education
Development and Technical Partner: QWERTY Innovation Co., Ltd.